Ụdị ejiji niile ewebatala nha ndị ọzọ na 2019 - Ụdị
Ụdị ejiji niile ewebatala nha ndị ọzọ na 2019
Site n'ikike nke Universal Standard
N'ime ụlọ ọrụ ejiji, ọrụ egbugbere ọnụ adịchaghị oke. Ụdị na ndị nrụpụta nwere ike ikwe nkwa ime nke ọma ma kwuo na ha nwere mmasị, mana ọ bụ ngwaahịa na -eme ọtụtụ okwu. Ihe akaebe na -egosi na ụdị na -ege ndị ahịa ya ntị, ọkachasị ndị na -eyi nha 12 na elu, na -abịa site na ime ihe: ịre ngwaahịa dabara ha - nke ahụ dịkwa mma.
Okwu ndị a bụ akara ndị agbatịkwuru oke nha n'ime afọ gara aga. Enweghị nkọwa doro anya nke na -ejikọ aha ndị a ọnụ. Ụfọdụ ọkachamara na denim, ndị ọzọ bụ uwe ime; enwere ndị nwere iberibe dị oke ọnụ na ndị ọzọ echekwara atụmatụ ha maka splurges pụrụ iche. Agbanyeghị, ha niile bụ ihe atụ nke ụzọ ụlọ ọrụ ejiji si azaghachi arịrịọ maka nhọrọ ụdị ejiji maka ụmụ nwanyị na -eyi akwa ma na -enwekwa ọmarịcha na ịdị mma nke na -eme ka ihe ọ bụla bụrụ ihe na -achọsi ike na mbụ. Nke kachasị, mgbatị nha ndị a ezubere ka ọ rapara ogologo oge, na -ebute ihe ọhụrụ, yana mgbakwunye.
justin bieber enyi nwanyị ọhụrụ ya
Ụmụ nwanyị nọ n'anụ ahụ dị mma na-eweghachite okwu abụba maka ihe ọ bụ, naanị adjective na-akọwa njirimara anụ ahụ ha. Ọ bụghịzi ya - ma ọ bụ ọ kwesịrị ịbụ - okwu ruru unyi, okwu 'F' nke ọzọ. Ihe malitere dị ka ọrụ izu ụka abụrụla ihe na-aga n'ihu ugbu a banyere ihe ọ dị ka ịbụ nwanyị gbakwunyere na America taa.
Na mmekorita ya na Universal Standard, adidas webatara nchịkọta dị na nha XS site na 4XL, oge mbụ akwa eji arụ ọrụ na -enye iberibe na nha kwesịrị ekwesị. Capsule gụnyere hoodie, elu, tank, croe mesh tee, legging, na bike dị mkpụmkpụ na agba anọ dị iche iche. Ọnụ ego niile dị n'okpuru $ 100.
$ 90 adidas Zụta ugbu a
N'ịgbaso ọtụtụ nnwale nnwale na nyocha, akwa akwa Alala nchịkọta mbụ nwere mkpokọta nwere ebe a, na-enye mgbatị mgbatị aka ya na nha 1X ka 3X. Ị ga -ahụ bras egwuregwu, leggings na ọsụsọ niile dị n'okpuru $ 200.
$ 110 Alala Zụta ugbu a
Ndị na -akwa akwa ugo America
Ọ bụ ezie na American Eagle batara na 2019 nke nwere oke denim nke dị n'agbata 00 ruo 20, na July gara aga, ika ahụ gbalịsịrị ike ya site na ịgbasawanye ya na jeans, na -aga 24. Ugbu a iberibe denim mbinye aka adịla. ndị na -ege ntị sara mbara, yana onyonyo na saịtị ika ahụ gara n'ihu na -anọchite anya ụwa IRL anyị bi na ya.
$ 37.46 bụ Ugo America Zụta ugbu a
Site n'ikike Anthropologie 4/14
Ọmụmụ ihe gbasara mmadụ
Anthropologie adịworị ka silhouettes na -agba agba, usoro ifuru, na ụdị bohemian ọgbara ọhụrụ. Dị ka Machị 2019, onye na -ere ahịa nwere ọtụtụ ihe gbakwunyere ebe ịzụ ahịa nke nwere mkpokọta na ndepụta ahụ, na mwepụta nke A+nthropologie. Na mgbakwunye na mbọ ndị gara aga iji mee ụdị anụ ahụ dị iche iche site na nchịkọta akọwapụtara nke obere, APlus nke Anthropologie guzobere ụdị ahụ nwere oke nha site na 00P ruo 26W. Mkpokọta a ka bụ eziokwu maka ihe ịchọ mma Anthropologie site na ụdị gụnyere Citizen of Humanity, Stone & Cloth, Farm Rio, na, n'ezie, atụmatụ ụlọ nke onye na-ere ahịa.
$ 130 Ọmụmụ ihe gbasara mmadụ Zụta ugbu a
Apiece Apart nke dabeere na New York mara mma nke ukwuu n'ihi na ọ dị mfe iji ejiji. Ọdịdị silhouettes na -atọ ụtọ mana ọ naghị agbagọ agbagọ, agba na -enwe mmetụta mana ọ naghị egbu maramara, na ihe niile yiri ka ọ nwere ihe m ga -eyi mma ụbọchị ise n'izu. Ma malite na Mee, ndị na -eyi ihe ruru afọ iri abụọ ugbu a nwere otu ahụmịhe, na -enye ohere karịa ụmụ nwanyị ndị na -agbasi mbọ ike na ndị mara mma ịbịaru uwe.
$ 395 Ibe Otu Zụta ugbu a
Ịgbatịkwu nha abụghị naanị ịgbakwunye sentimita ọzọ na akwa akwa. Ọ na -ewe nnwale na nlebara anya zuru oke maka nha na ọdịdị ahụ iji mee ka ọ dị mma. Athleta na-agbasi mbọ ike site na mwepụta nke onyinye ọhụụ, agbatịkwuru agbagogo ruru 3X.
$ 98 Onye egwuregwu Zụta ugbu a
Uwe mkpuchi ihe mkpuchi nke Diane von Furstenberg ga -adị ugbu a na nha 14 ruo 24, maka njikọ ọhụrụ nke ika ahụ na 11 Honoré. Saịtị e-commerce okomoko ga-eburu ụdị Julian abụọ n'ime atọ nke onye nrụpụta ihe ochie: Leopard Sand, Houndstooth, Camelias Black.
$ 568 11 Sọpụrụ Zụta ugbu a
Ihe karịrị otu afọ gara aga, Draper James megharịrị iberibe kpochapụwo ya dị ka mmekorita ya na akara ngosi Eloquii. Mana nke ahụ tụgharịrị bụrụ naanị ihe mkpali maka mgbanwe ka ukwuu na ahịrị ntọala Reese Witherspoon. N'oge opupu ihe ubi nke 2019, Draper James gbara arụmụka nha nke gọọmentị iji hụ na nwanyị ọ bụla site na nha 0 ruo 24 ga -enweta iberibe ya.
$ 150 Draper James Zụta ugbu a
Maka Ịhụnanya & Lemọn
Maka Ịhụnanya & Lemọn abanyela n'ọmarịcha mara mma, na-atọ ọchị, nke na-eme ka ọ bụrụ ihe ịchọ mma site na mmalite ya, na-eme ka ọ bụrụ ebe mgbakwasa oriri na maka onye ọ bụla nwere mmasị na-adọrọ adọrọ. N'ọnwa gara aga nke gụnyekwara ndị ahịa ọhụrụ ole na ole site na ndọtị nke nchịkọta site na iberibe asaa enyere na nha 1X na 2X, ihe ruru nha US 18. Ọ bụ ezie na nke a bụ ntakịrị mmụba na nha, ọ na -akara akara nzọụkwụ na-ekwe nkwa maka akara nke, ruo n'oge na-adịbeghị anya, gosipụtara obere ọdịiche dị n'etiti e-commerce ya na onyonyo mgbasa ozi mmekọrịta.
echiche onyinye maka ụbọchị nne
$ 286 Maka Ịhụnanya & Lemọn Zụta ugbu a
KELLE RAMSEY 10/14
N'ịgbalị iru ọtụtụ ndị na -eyi bra, Harper Wilde gbatịkwuru oke nha ya na Febụwarị gara aga ma ugbu a na -esite na nha 32 ruo 42, na iko A ruo F - nzọụkwụ ọzọ dị mma maka akara nke emebelarị aha. maka ụdị ya kwa ụbọchị dị ọnụ ala, na nhọrọ atọ nke ụda ịgba ọtọ iji gbakwunye akwa akwa.
$ 45 Harper Wilde Zụta ugbu a
N'ime izu ejiji New York na Septemba, Rebecca Minkoff kwupụtara mmekọrịta pụrụ iche na Stitch Fix nke na -egosipụta iberibe na nha 00 ruo 24 na XXS ruo 3X, na -akara akara nnabata mbụ ya na mgbakwunye. Mpekere ndị ahụ dị naanị site na ọrụ nhazi ịntanetị, n'agbanyeghị.
Nke mbụ bụ nchịkọta capsule, emesịa ọ bụrụ nchịkọta denim. N’afọ 2019, Ndozigharị mechara webata nchịkọta mbụ ya na -adịgide adịgide dị na nha 14 ruo 24 na 1X ruo 3X. Ahịrị ọkacha mmasị nke òtù nzuzo na ahịrị dị mkpa maka gburugburu ebe obibi mere ọkwa mgbasawanye nha ya na Machị gara aga, na -edebanye aha ụdị Ali Tate Cutler iji nyere aka chepụta nchịkọta mmalite. Dị ka uwe na-esi ísì ụtọ na iberibe sitere n'ike mmụọ nsọ Ndozigharị na-eme nke ọma, nchịkọta a na-agbatị agbatị dabara na ọtụtụ akwa mkpuchi, uwe mwụda midi, na akwa dabara adaba.
$ 148 Ndozigharị Zụta ugbu a
Veronica ajị agba
Veronica Beard nke dabeere na New York jiri oge zuru oke wee malite mgbasawanye nha na akara ya: Izu Ejiji New York. Ọ bụ ezie na egosiri nha ndị agbatịkwuru na ngalaba ọgwụgwọ nke saịtị ụlọ ọrụ ahụ, onyinye ya siri ike ma nwee otu uwe dabara mma, mpempe akwụkwọ dị arọ, na uwe mwụda mara mma nke ika ahụ kacha mara mma. onye mmeri kacha ukwuu maka ụdị ahụ dị iche iche, Katie Sturino, ka ọ bụrụ ihe atụ na ngosi ngosi ya n'izu izu - mmegharị sochiri Sturino itinye akara na usoro #MakeMySize ya na Instagram.
$ 425 Veronica ajị agba Zụta ugbu a
Site n'ikike Vine Vine 14/14
Na mbido ọnwa Ọgọstụ a, Vineyard Vine bidoro mkpokọta ọdịda ya n'ụdị nha ya niile. Na-agba ọsọ site na 00 ruo 24, yana denim na nha 24 ruo 37, ụdị ọhụrụ nke ika ahụ ka bụ eziokwu maka preppy ya, nchịkọta nke ọnya dị mfe iyi na anya dị njikere maka ezumike. Ọnụ ahịa agbatịkwuru dị ugbu a n'ịntanetị yana n'ụlọ ahịa ahọpụtara.
$ 98 Mkpụrụ vaịn Zụta ugbu a
bra bra kacha mma maka iko d
Akpụkpọ ụkwụ bikini dị elu adịghị mma
esi eto ntutu azụ azụ ngwa ngwa
ego ole bụ ụbọchị spa